Ny Bot TikTok tsara indrindra eny an-tsena
Ny TikTok Bots tsara indrindra eny an-tsena sy ny fomba hiarovana ny kaontinao
Andrana maimaim-poana 3 andro
Ataovy mandeha ho azy ny fanarahana / aza manaraka ny fombany
Tena azo antoka miaraka amin'ny proxy namboarina
Algorithme marani-tsaina sy hafainganam-pandeha haingana
Ho an'ny antsipiriany bebe kokoa
Tsy misy fitsarana maimaimpoana amin'izao fotoana izao
Toy ny mandeha ho azy ny fomba
Fikirana azo antoka fa tsy misy proxy
Smart setting na dia amin'ny fonosana fototra aza
Tsy misy fitsarana - $ 15 isan-kerinandro
Toy ny mandeha ho azy maotera
Sehatra azo antoka nefa tsy misy proxy
Targeting Smart sy masontsivana
Tsy misy fitsarana maimaimpoana
Araho / Aza manaraka bot botika
Fikirana mandroso sy tohana
Tsy misy andrana fa mora amin'ny $ 15 isam-bolana
Automation mifototra amin'ny fanarahana / aza manaraka / Tianao
Tsy misy proxy, azo antoka azo antoka
Fikendrena marina sy fampisehoana tsara
Tsy misy fitsarana
Automation mifototra amin'ny Jaime
Tsy misy proxy fa sehatra azo antoka
Smart Target ary fanaraha-maso haingana
Araho / Aza manaraka / Toy ny bot botika
Tsy misy toe-javatra proxy
TikTok no sehatra media sosialy farany izay nahitana fitomboana tsy nisy toy izany hatramin'ny nivoahany tamin'ny Septambra 2016..
Nihalehibe izy ary lasa mpifaninana lehibe amin'ny media sosialy., ary noho ny antony tsara.
TikTok dia karazana nofy ho an'ny mpivarotra, miaraka amin'ny faharetan'ny fotoana sy tahan'ny fifamofoana eo amin'ny avo indrindra media sosialy.
Tsy mahagaga noho izany izao fa misy bitsika TikTok eny an-tsena izay afaka mandeha ho azy ny asa manokana., toy ny manaraka, manara-dalàna, hevitra ary toy ny lahatsoratra.
Tianay ho fantatra izay bototra misy, ny fomba fanatontosany ary raha mendrika ny hodinihin'ireo influencer sy mpivarotra izy ireo.
Ireo botsika TikTok lehibe
Nijery ny 7 amin'ireo TikTok Bots malaza indrindra misy ankehitriny izahay:
Tik Tok Bot - Ny TikTok Bot tsara indrindra eny an-tsena, n ° 1 hatreto.
TikTool - Fitomboana tsara, azo antoka, miaraka amin'ny endri-javatra marani-tsaina – #2.
TokUpgrade - Mametraka ary manadino – n ° 3
Jeffrey - Sehatra tsara misy famakafakana tsara – n ° 4.
Instamb - Fomba tsotra kokoa izay mandeha tsara – n ° 5.
Tok Growth - Tsara ho an'ny vao manomboka nefa tsy mifantoka loatra – n ° 6.
Vire - mandeha ho azy miadana kokoa raha ampitahaina amin'ny serivisy hafa – n ° 7.
TikTokBot.io Manampy anao hanatsara ny kaontinao amin'ny alàlan'ny fandraisana andraikitra mandeha ho azy ary manana ny mety hisarihana mpanaraka an'arivony arakaraka ny fotoanan'ny bot.
Nihazakazaka TikTokBot nandritra ny herinandro vitsivitsy izahay ary talanjona tamin'ny kalitaon'ny fiasa sy ny valiny..
Haingana sy mora ny fametrahana, ary misy fiasa maro hilalaovana sy hanatsara ny automatisation anao.
Vidiny – $$ – $29.90 p/m
toetra – 4/5 – Track / Aza manara-maso ny mandeha ho azy amin'ny safidy kendrena marobe, algorithm manan-tsaina sy fanadihadiana.
ARO – 4.5/5 – Tafiditra ao ny fifandraisana azo antoka sy ny proxy finday.
Assistance – 4.5/5 – Fanohanan'ny mpanjifa Premium hanampy anao amin'ny dia.
Fanamarihana – 4.5/5 – Io no tsara indrindra amin'ny zavatra rehetra ary tianay indrindra ny fanamorana ny fampiasana sy ny fanamafisana ny filaminana..
TikTool mampiasa fanarahana fenitra / aza manaraka ny automatisation style miaraka amina fiasa fanampiny vitsivitsy.
Fitaovana fanoloran-kevitra marani-tsaina sy izay mahita tenifototra manome zana kely azy amin'ny fifaninanana.
Ny vidin'ny safidy fototra dia avo dia avo, ny an'ny serivisy premium, haingana sy tsara kokoa, avo kokoa.
Vidiny – $$ – $29 p/m
toetra – 4.5/5 – Endri-javatra tena tsara, ao anatin'izany ny tenifototra sy sosokevitra marani-tsaina.
ARO – 4/5 – Sehatra azo antoka nefa tsy misy safidy proxy namboarina.
Assistance – 3.5/5 – Fanohanana fototra raha tsy mifidy ny serivisy premium amin'ny vidiny avo roa heny ianao.
Fanamarihana – 4/5 – Sehatra tena tsara fa tsy misy proxy mamela azy hidina.
Tokupgrade nahazo dera be dia be, ka tsy maintsy nanandrana azy izahay.
Manana drafitra roa hanombohana anao izy ireo – mahazatra sy pro.
Amin'ireo tranga roa ireo, mahazo tombony amin'ny mpitantana kaonty voatokana sy fanohanana feno ianao.
Vidiny – $$$ – $60-100 p/m
toetra – 3.5/5 – Sivana tsara fa ny tanjona dia miorina amin'ny kaonty ihany.
ARO – 3.5/5 – Sehatra azo antoka nefa tsara ny mahita proxy.
Assistance – 4/5 – Anisan'izany ny mpitantana kaonty.
Fanamarihana – 3.5/5 – Serivisy mendrika nefa mila filaminana bebe kokoa amin'ity vidiny ity.
Jeffery no anaran'ny bot TikTok lehibe.
Araho / aza manaraka ny mandeha ho azy hanombohana mampiditra ireto mpanaraka ireto.
Manana drafitra roa karama izy ireo – Manomboka orinasa iray, izay mitondra ny fitambaran'ny astronomika 349,$ 99 isam-bolana.
Mandrak'izao, tena tsara ireo tatitra ary nahazo fanamarihana tsara maro izy ireo.
Vidiny – $$$ – $49.99 p/m
toetra – 4/5 – lasibatra, ny statistika maranitra sy ny masontsivana dia mora ampiasaina.
ARO – 4/5 – Misy sehatra azo antoka sy proxy tsy miankina.
Assistance – 4/5 – Fanohanana mpanjifa 24 ora, 7 andro 7.
Fanamarihana – 4/5 – Automation tsara izay manamarika ireo boaty rehetra, somary lafo kokoa.
Instamb Le bot TikTok, mitovy amin'ny Auto Tokker, mamela anao hahazo olon-tiana sy mpanaraka mandeha ho azy, izay mifototra amin'ny solonanarana sy tenifototra.
Mora kokoa izy io, nefa manolotra sehatra tsara hampivelatra ny TikTok anao.
Eo amin'ny faran'ny ambaratonga mora kokoa izy io nefa mbola manome sehatra tsara hampitomboana ny TikTok anao.
Vidiny – $ – $15 p/m
toetra – 3.5/5 – Fampiasana anarana sy fanondroana tenifototra mahazatra.
ARO – 3/5 – Fifandraisana azo antoka fa tsy misy safidy proxy.
Assistance – 3.5/5 – Fanampiana an-tserasera.
Fanamarihana – 3.5/5 – Serivisy mandeha ho azy tsara, fa mila proxy.
Tok Growth dia serivisy mahomby izay manolotra fampiasa tsara.
Noraisiny ny fomba fanao mahazatra amin'ny fanolorana formula 2, Starter sy Pro.
Manome anao toe-javatra tsara lavitra kokoa ny Pro, fa amin'ny vidiny lafo kokoa.
toetra – 3.5/5 – Ny fonosana Starter ihany no kendren'i Hashtag.
ARO – 3/5 – Sehatra azo antoka nefa tsy misy safidy proxy.
Assistance – 3/5 – Tsy fahampian'ny fanohanana natokana.
Fanamarihana – 3/5 – Tsy ratsy, fa amin'ny vidiny, mety ho tsara kokoa.
Vire dia lohahevitry ny fisavoritahana tato ho ato, saingy tsy azontsika antoka fa ara-drariny izany.
Amin'ireo sehatra rehetra nodinihinay, io ilay toa lafo indrindra miaraka amina endri-javatra kely indrindra.
Na izany aza, manolotra fitantanana kaonty feno izy io, inona no mety hahaliana ny olona sasany.
Vidiny – $$$ – $100 p/m
toetra – 3/5 – Fikendrena Hashtag sy endrika hafa.
ARO – 3/5 – Tsy misy porofon'ny mifanentana amin'ny proxy.
Assistance – 4/5 – Mpitantana kaonty sy fanohanana an-tserasera.
Fanamarihana – 3/5 – Mampalahelo fa tsy mifanaraka amin'ny hatsikana izany.
Ahoana ny fomba hiarovana ny kaonty Tik Tok anao amin'ny fandraràna ?
Voarara nandritra ny fotoana fohy ny media sosialy ary eo izy io noho ny antony marim-pototra.
Manakana ny mpampiasa tsy hanararaotra fetra hanohanana ny fitomboany izy ireo, izay indraindray mety hanasarotra ny fitomboan'ny mpanaraka anao.
Ho hita eo foana ireo fetra ireo, noho izany ny zavatra tsara indrindra azonao atao mba hiarovana ny kaonty TikTok dia ny fampiasana a finday proxy.
Ny proxy finday dia midika fa ny fifandraisanao amin'ny TikTok dia mitovy amin'ny an'ny mpizaha finday, izay miantoka fa tsy hisy fiatraikany amin'ny isa natokisanao raha mihoatra ny fetra ianao.
Zava-dehibe ny mahatadidy fa ny fahazoana sakana iray ary voarara dia zavatra roa samy hafa., araka ny aseho etsy ambany:
Ny sakana dia mazàna midika fa voasakana tsy handray andraikitra ianao
Voarara ny fandrarana rehefa esorina vetivety na maharitra amin'ny serivisinao ny kaontinao
Maninona no voasakana ny kaonty TikTok anao ?
Ny kaonty TikTok anao dia mety ho voasakana noho ny antony maro samihafa.
Matetika izany no mitranga rehefa:
Manaraka olona be loatra ianao
Tianao ny toerana be loatra
Matetika ianao manome hevitra
Ny fanehoan-kevitrao dia voajanahary amin'ny fomba spammy
Mandefa zavatra mifanohitra amin'ny torolàlana EU ianao
Raha manaraka ny torolalan'ny vondrom-piarahamonina TikTok ianao ary tsy mametraka zavatra vetaveta, mety tsy hahita olana ianao.
Inona no tena antony nanakana ny kaontinao ?
“Fandraisana anjara amin'ny votoaty cyberbullying, fanorisorenana na teny fankahalana na fandrisihana hankahala olona iray na vondron'olona noho ny firazanany, ny fokony, ny fivavahany, ny zom-pireneny, ny kolontsainy, ny kilemany, ny fironany ara-nofo, ny firaisana ara-nofo, ny maha-lahy na maha-vavy azy, ny taonany na ny fanavakavahana hafa dia mety hitarika amin'ny fandrarana” araka ny toromarika ho an'ny fiaraha-monina.
Lahatsoratra miboridana – Antony mazava izany ary niteraka olana ho an'ny olona maro Instagram. Tsy misy orinasa media sosialy maniry ny miboridana eo amin'ny lampihany, indrindra fa natao ho an'ny mpihaino tanora. Soso-kevitra tsara mba hadio foana ny horonan-tsary rehetra.
Alefaso hafatra momba ny basy na zava-mahadomelina tsy ara-dalàna – Ny fandefasana basy na zava-mahadomelina rehetra dia mifanohitra amin'ny torolalan'ny vondrom-piarahamonina ary mety ho voarara lava.
Famoahana votoaty misy copyright – Amporisihina ny tsy hampiasanao votoaty misy copyright amin'ny horonan-tsary TikTok. Ny famoronana dika mitovy mazava amin'ny lahatsarin'ny mpampiasa malaza hafa dia mety hiafara amin'ny fandraràna mangalatra.
Maharitra hafiriana ny fandrarana TikTok ?
Manodidina ny 14 andro ny faharetan'ny fandrarana matetika.
Na dia izany aza, raha tsy mitsahatra mandika ny torolàlana EU ianao, afaka mahazo tombony amin'ny fandrarana lava sy tsy voafetra ianao.
Ahoana no hiatrehana ny fandrarana mangingina ?
Afaka miandry ianao raha malaza ny kaontinao. Azonao atao koa ny mamorona kaonty Tik Tok vaovao.
Misy mpampiasa milaza fa voasakana tanteraka ny adiresy IP-ny, Ny hany fomba hamahana azy dia ny manova ny adiresy IP-nao.
Lahatsoratra teo alohaInona avy ireo Bots Instagram tsara indrindra amin'ny 2020 ary ny fomba hiarovana ny kaontinao?
Lahatsoratra manarakaReels Instagram : Valin'ny Instagram an'i TikTok